Kohalpur Times » ३०३ सङ्क्रमित थपिए, उपत्यकाका १५४ मा पुष्टि ३०३ सङ्क्रमित थपिए, उपत्यकाका १५४ मा पुष्टि – Kohalpur Times
३०३ सङ्क्रमित थपिए, उपत्यकाका १५४ मा पुष्टि
२९ चैत्र २०७७, आईतवार १८:२६
नेपालमा कोरोना भाइरसका ३०३ जना नयाँ सङ्क्रमितको पहिचान गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबीस घण्टामा तीन हजार १२५ जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा ३०३ जनामा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको हो । मन्त्रालयको कोभिड १९ सम्बन्धी जानकारी सार्बजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पछिल्लो चौबीस घण्टामा थपिएका सङ्क्रमितसँगै नेपालमा कुल सङ्क्रमितको संख्या दुई लाख ८० हजार २८ पुगेको जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो चौबीस घण्टामा एन्टिजेन परीक्षणमा ६४ जनामा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको बताउनुभयो । उक्त संख्या आरटीपीसीआरबाट सङ्क्रमणको पुष्टि भएकामा जोडिएको छैन् ।
मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो चौबीस घण्टामा १५४ जनामा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ । ११ जना भक्तपुरमा, १५ जना ललितपुरमा र १२८ जना काठमाडौंमा सङ्क्रमितको पहिचान गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले बताउनुभयो । पछिल्लो चौबीस घण्टामा १४१ जना सङ्क्रमित निको भएर घर फर्केका छन् । हालसम्म दुई लाख ७४ हजार २७ जना निको भइसकेका छन् । पछिल्लो चौबीस घण्टामा कोभिड सङ्क्रमणले एक ब्यक्तिको मृत्युको पुष्टि भएको छ । हालसम्म नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट तीन हजार ४० जनाको मृत्यु भएको छ । हाल दुई हजार ९६१ जना आइसोलेशनमा र ८३ जना क्वारेन्टिनमा छन् । हालसम्म २३ लाख १२ हजार ९०१ जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएको छ ।
पार्टीलाई सत्तामा पुनःस्थापित गर्न ओलीका यस्ता छन् दुई रोडम्याप
आईपीएल क्रिकेटमा काेलकाताले बेङ्ग्लाेरलाई ९ विकेटले हरायो
नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले आज हङकङसँग खेल्दै
सोह्र श्राद्ध आजदेखि सुरु